Isixhobo esifanelekileyo seMpembelelo okanye iNtatheli yokuFikelela | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Februwari 14, 2014 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
IMeltwater ibingumxhasi omkhulu webhlog yethu. Senze i-webinar yamanye amazwe kunye nabo ekumameleni kwezentlalo eyayipakishwe kwaye inempendulo enkulu. Kwaye sele sikulungele ukukhupha i-infographic yethu yokuqala kunye nabo! Inkxaso-mali ijolise kwiiNdaba zabo nakwiimveliso zeBuzz zokuphulaphula ngokwesiko nakwezentlalo, ngokwahlukeneyo, kodwa bendifuna ukuzisa inqaku lemveliso yabo yeendaba yeengcali zezoBudlelwane boLuntu ezenza ubomi bam njenge nefuthe itoni ngokulula…
Uninzi lweendawo endizifumanayo kwiingcali zoNxibelelwano noLuntu zivela kwiidilesi zabo kwaye zi-batch kunye ne-blast irritants ezivala ibhokisi yam engenayo. Aba bantu basebenzisa izixhobo zokukhangela zemveli ze-PR ezidwelisa uluhlu lweedilesi zam ze-imeyile kwaye ba-SPAM the crap out of me. Abayiqondi indlela yokwenza phosa ibhlog kwaye ndiqinisekile ukuba intatheli zithanda amaqhinga abo nangaphantsi.
Ndiphendula kwiindawo ezihlwempuzekileyo okanye ezingabalulekanga ngokungathandabuzekiyo emntwini ukuba athathe imizuzu emi-5 ukubona ukuba umxholo wam uyasebenza na kumxhasi wakhe. Andiqondi ukuba uninzi lwabo lwenza oko kuba bengxamile kwaye abacingi ukuba kukho iziphumo zezenzo zabo. Kodwa zikho. Abantu abanjengam baxela ngokukhawuleza njengeJunk ukuze singaze sibone enye inow kwibhokisi yethu engenayo. Ngelishwa lilishwa lomntu lowo we-PR-onokuthi ngenye imini abe nesandi esihle kwibhlog yethu.
Izolo, ndifumene i-imeyile ye-pitch evela kwi-Arhente ye-PR isebenzisa Izixhobo zokufikelela kuluntu eMeltwater. Andizukukhankanya umthumeli kuba bebengadibani- kodwa i-imeyile yayiyi-HTML enemizobo kwaye yayinokhetho olulungileyo kwihlabathi kuyo-i ungabhalisi ikhonkco. Ukunqakraza eli khonkco, ndaziswa kwesinye isikrini:
Wow, ukhetho lokungabhalisi kule mihlaba okanye kuyo yonke imithombo yeendaba! Inamandla, iyabonakala kwaye ibambe iarhente ye-PR kunye noMeltwater ukuba baphendule kuye nakubani na osebenzisa kakubi inkqubo yabo. Eyona nto inomdla ngakumbi kukukhetha i-imeyile evela eMeltwater okanye ukuhanjiswa kwinkonzo yakho ye-imeyile. Eli linqanaba elongezelelweyo lokuphendula kuba uninzi lwabathengi be-imeyile banikezela amandla okuhambisa iidilesi ze-imeyile ngokuzenzekelayo okanye nokubavimba.
Ukuba ukhokela ubudlelwane bobungcali boluntu okanye iarhente yokufikelela kwaye ufuna iqela lakho ngokwenyani ukuba lakhe ubudlelwane (njengoko kufanelekile) kwaye ubenze baphendule, olu luhlobo lwesixhobo osifunayo ukufikelela kuluntu. Ukungachazi IMeltwater inabafowunelwa abangaphezulu kwama-350,000 kwimithombo yeendaba ngetoni yolwazi nganye ukunceda ufumane abachaphazeli abafanelekileyo kunye neentatheli.
Ukubhengezwa: Esi sithuba ASIKHO siceliweyo nguMeltwater, yayindim kuphela.
tags: ukumaukufaka i-imeyileukuxhoma abachaphazeliUkubeka iintatheliprEyobudlelwane boluntu
Ixesha elidlulileyo, elangoku, kunye nexesha elizayo lokuThengisa kwi-Intanethi